Shina Smart Street Light mpanamboatra ary mpamatsy - Langxu Lighting.
Home > Products > Smart Street Light
Ny jiro an-dalambe dia afaka mampihena ny fitrandrahana herinaratra amin'ny jiro eny an-dalambe ary afaka manatsara tsara ny fikajiana ny angovo.Mba haka ny tetikasa fanarenana ny lalana Yihui ao Nansha, ny teknolojia fampiharana ny teknolojia ao Guangzhou ho ohatra. Misy jiro 18. Ny jiro marani-tsaina dia novaina miorina amin'ny jiro LED, ary ny fomba fijerin'ny fiara sy ny fomba fanaraha-maso ny fotoana dia nampiana tamin'ny jiro. Ny fahefana dia fehezina. Amin'ny alàlan'ny valim-panadinana farany herintaona, ny taham-pamokarana angovo dia mahatratra hatramin'ny 78,73%, ary ny vidin'ny famonjena fanaovan-taona dia 6044.4 yuan, izay mitovy amin'ny fanavotana arina mahazatra an'ny 9,93 taonina, ary ny fitrandrahana karbona isan-taona isan-taona. Ny fihenan'ny famoahana dia mihena amin'ny 24,75 taonina.
Ny jiro Smart dia manana fifehezana feno sy voalamina tsara amin'ny jiro arak'asa eny an-dalambe, manome fitantanana sy fikojakojana tsara kokoa ho an'ireo mpitantana jiro an-dalambe.
Buy Smart Street Light nyvy nymin'ny Lnyngxu Lighting mpnymnytsy nyry mpnymoknytrny, isikny mnynnynny ny betsaka ny fomba Smart Street Light ao amin'ny staoky. Welcome ny fitsaharana nyssured ny wholesnyle nyry cusnymized Smart Street Light Style nyvy nymin'ny ny fnycnyry, isikny dia manome ianao amin'ny chenyp pricelist nyry tsara indrindra quotnytion for ianao.